Rikooradii layaabka lahaa ee laga diiwaan geliyey Kulankii England iyo Sweden? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Rikooradii layaabka lahaa ee laga diiwaan geliyey Kulankii England iyo Sweden?
(08-07-2018) Kadib kulankii ay England ugu soo bacday Semi-Finalka koobka aduunka ee ay Sweden ku Garaaceen 2-0 waxaa lasoo saaray Rikooradii iyo Waxyaabihii ku cusbaa Cayaartaas oo ahayd mid aad u adag.
Hadaba Maxaa laga diiwaan geliyey Kulankaas?
1 Sideed Gool oo ay England ka dhaliyeen koobka aduunka 2018 dhamaantood waxa ay ahaayeen Kubadaha Geesaha laga keeno ee loo yaqaan set-pieces Waana wadankii ugu horeeyey ee sidaa sameeya koob aduun tan iyo Portugal Sanadkii 1966 dii.
2 Swden ayaa lumisey 3 ka mid ah 4 tii kulan ugu danbeeyey ee ay ladheelaan dalka England Waana kulankii 12 aad ee Xiriir ah ee Sweden aysan ka badin England.
3 Lix ka mid ah 11 Gool ugu danbeeyey ee England ka dhaliso Sweden waxa ay ahaayeen kuwo lagu dhaliyey madaxa waxaana kala dhaliyey 6 Cayaaryahan oo kala du duwan kuwaas oo kala ah (Sol Campbell, Steven Gerrard, Gareth Barry, Andy Carroll, Maguire iyo Alli).
4 England 11 Gool ayey ka dhaliyeen koobkaan aduunka ee hadda socda waana markii koowaad ee ay dhaliyaan Goolal intaa la eg tan iyo Koobkii ay qaadeen Sanadkii 1966 dii.
5 Dele Alli ayaa Noqdey Cayaaryahankii labaad ee ugu da.da yaraa ee koobka aduunka Gool ka dhaliya una dhashay dalka England waxaana uu jiraa 22 years iyo 87 maalmood), kaliya waxaa ka yaraa Michael Owen oo jirey (18 years iyo 190 days against Romania in 1998).
6 Maguire ayaa Noqdey daaficii ugu horeeyey ee England Gool u dhaliya kulan Neg awd ah tan iyo Rio Ferdinand kaas oo 2002 dii Gool ka dhaliyey Denmark.